Gịnị bụ Good Life? — njem Lee - Official Site
M nwere mmasị songs dị ka "Ego bụ na Ihe Ọ Bụla,"Na m nọ na-ege albums jiri utu aha ndị dị ka" Get Rich ma ọ bụ Die Ịgbalị. "N'ihi ya, ọ bụ n'ezie bụghị ihe ijuanya na m echiche nke ọma ndụ na-enwe a obere akpa nke mere stuffed na ọ ga ọbụna nso. Ọ bụghị ihe niile banyere ego, ezie na. M mụtara banyere hedonism, mmekọahụ nkịtị, ịhụ ihe onwunwe n'anya, irresponsibility, umengwụ, ọgwụ ọjọọ eme ihe, na-na-akwanyere - niile dị ka iberibe na mgbaghoju anya bụ ezi ndụ.
Na isi nsogbu na picture m nwetara a ezi ndụ bụ na ọ dabeere m. Ọ bụ ihe niile banyere m. Olee otú m ga-esi ego? Olee otú m ga-esi akwanyere? Olee otú m ga-esi ọnọdụ? Olee otú m pụrụ ịgbaga ụwa? Ihe m na-ege ntị na eri bụ a ụyọkọ nke ụgha. Na mgbe na-eto eto ịgbanwuo redio, ezie na e nwere ọtụtụ hip-iwuli elu na na ada ụda dị mma, nke ukwuu nke na ọ na-ejupụta ụgha banyere ihe ndụ dị mma n'ezie bụ.
Unu ga-esi m na-ezighị ezi bụ ezie na. Hip-iwuli elu music abụghị nsogbu. Ndị mmehie ụgha ndị. Ihe mere m ebupụtara na on hip-iwuli elu bụ n'ihi na ọ bụ m omenala na eziokwu. M nwere ike na-na na kpọrọ asị hip-iwuli elu, ma m ka na-eme, e nri ndị kpọmkwem otu ụgha n'ọnụ onye ọzọ. Na m nanị ọdịmma onwe, ebube-agụụ na-agụ obi riri ha.
Ma mgbe m zutere Jesus, ihe gbanwere. M na-ezute a ọhụrụ picture nke ụwa na a ọhụrụ picture nke ndụ. Na otú ahụ ka m na a ọhụrụ ọchịchọ chepụta otú na-ebi ndụ ndụ n'ụzọ zuru ezu. Achọghị m na-ebi ndụ ndụ na ìhè nke ụgha ọzọ. M chọrọ eziokwu.
Ọ bụrụ na anyị anọgide na-ekwere ụgha banyere otú anyị kwesịrị ibi ndụ, ndị na-esi na-isi. Anyị ga-bụghị naanị na-ebi ụfọdụ ndị ọzọ nhọrọ; anyị ga-adịghị ibi otu anyị na e kere. Anyị ga-ala n'iyi ndụ anyị ịchụ stof nke ahụ adịghị mkpa. Anyị ga na-atụ uche chebara ihe. Anyị gaghị ezi ọṅụ na afọ ojuju. Anyị na-adịghị ndụ dị ka anyị na e kere na-ebi ndụ. Anyị na-adịghị ndụ ndị ezi ndụ.
N'ezie Akwụkwọ Nsọ mgbe eji okwu bụ "ndị ezi ndụ." Ma mgbe anyị na-ekwu "ezi ndụ" anyị na-emekarị pụtara ndị kasị mma ụdị ndụ anyị na-ebi. N'ihi ya, m chọrọ inwe ihe ndị kasị mma ụdị ndụ bụ Bible. Achọrọ m ka anyị dị ndụ n'ụzọ na e kere anyị ibi. N'ihi ya, m chọrọ ile anya na ihe atọ ndị ezi ndụ bụ.
m. The Good Life dị ndụ site n'okwukwe ekwere na a Good Chineke
Na akwụkwọ ahụ bụ otú m kọwaa ezigbo ndụ. Ndụ site na okwukwe na ezi Chineke. Ma ka m gwa gị ihe mere.
ANYỊ nile na-esite n'okwukwe
Ma anyị na-aghọta ya ma ọ bụ, anyị niile bụ ndị ndị nke okwukwe. Kpukpru mmadụ. Kraịst, Alakụba, Ndị Hindu na-, Buddha, Agnostics, -Ekweghị na Chineke - anyị nile bi site n'okwukwe, anyị na-ebi ìhè nke ihe anyị kweere na ọ bụla. Ndị gị onye na-eme egwuregwu na-eme n'ezie ike. Gịnị mere? N'ihi na i kweere na ọ ga-eme ka ị ka mma na gị egwuregwu (ma ọ bụrụ na ị na-m na-eto eto na-akpọ basketball ma ka na ịbụ n'ezie ọjọọ). Ma ọ bụ otú banyere nke a. Ụfọdụ n'ime unu na-etinye adreesị Google Maps iji nweta ebe a taa. Gịnị mere? N'ihi na i kweere na ekwentị gị ga-enye gị ikike ntụziaka. Ọ bụrụ na ị kweere na ekwentị gị ga-duhie gị, nke m na-eche m na-eme mgbe ụfọdụ, unu agaraghị eji ya. M nwere ike ịga na na na. Ma anyị niile bi ndụ site n'okwukwe.
M ekwu okwu banyere nke a n'akwụkwọ. M n'ezie ọjọọ na ntụziaka. My nwunye na-anọgide tụrụ ya n'anya otú ogbi m na ntụziaka. Otu oge m gara odụri n'ime a driveway tụgharịa, ma mgbe ahụ, m wee laghachi esikwa n'ụzọ ahụ pụọ. n'ezie ọjọọ. Ọ ga-abụ nnọọ ogbi na-atụkwasị m obi iduga gị. N'otu aka ahụ, anyị niile adawo. Obi anyị na-edu anyị adịghị mma. Ekwensu na-azụ anyị ụgha, ụwa ekesa ha, na obi anyị erichapụ ha. N'ihi ya, kama ikwe ka obi anyị na-eduzi anyị, dị mkpa ka anyị na-eme ihe okwukwe na eziokwu.
Na nke kacha mma-agwa anyị banyere otú kacha mma na-ebi ndụ a na-Chineke n'onwe Ya. Anyị na-adịghị nnọọ echere ka o dobe clues site n'Eluigwe; anyị anya na ihe O merela kwuru. Anyị nsogbu bụ na anyị ekwetaghị ụgha na onye iro n'elu eziokwu nke Chineke.
Chineke kere Adam na Iv. O nyere ha ntụziaka maka otú ibi ndụ. Ọ si ha rie nri si n'osisi ọ bụla, ma e wezụga n'ihi na osisi nke ima ezi ihe na ihe ọjọ.
Ugbu a agwọ ahụ ọzọ aghụghọ karịa ihe ọ bụla ọzọ anu-ọhia ahu nke Jehova bụ Chineke kere. Ọ gwara nwanyị, "Ọ bụ Chineke ga-ekwu okwu, 'You Ga-eri nke osisi ọ bụla na garden'?"Nwaanyị ahụ wee sị agwọ, "Anyị nwere ike iri mkpụrụ nke osisi n'ogige, ma Chineke siri, 'You Agaghi iri mkpụrụ nke osisi ahụ nke dị n'etiti ubi, agaghi-eme kwa unu na-emetụ ya, ka i ghara die.' "Ma Agwọ ahụ wee sị nwaanyị ahụ, "Ị gaghị anwụrịrị. N'ihi na Chineke maara na mgbe ị na-eri ya anya unu ga-emeghe, na ị ga-adị ka Chineke, na-ama ezi ihe na ihe ọjọ. "N'ihi ya, mgbe nwanyị ahụ hụrụ na osisi ahụ dị mma oriri, nakwa na ọ na a obi ụtọ na anya, na na osisi ahụ dị na-achọsi ime ka onye maara ihe, O were ụfọdụ n'ime mkpụrụ ya, rie, o nyekwara ụfọdụ di ya bụ onye ya na ya, o we rie. (Genesis 3:1-6 ESV)
Adam na Iv kweere ụgha nke agwọ n'elu eziokwu nke Chineke. Nke a bụ ihe kacha anyị nsogbu dị ka nke ọma. Anyị kweere na ụwa mgbe ha na-agwa anyị na ha nwere ihe ka mma na-enye karịa Chineke. Anyị kwenyere na anyị anụ ahụ mgbe ọ na-agwa anyị anya na na website. Anyị na ekwensu mgbe ọ na-ekwu na anyị na-na na na etiti nke eluigwe na ala. Anyị kwenyere ụgha ndị ahụ kama eziokwu Chineke. Na nke ahụ bụ ihe na-eme anyị si ezi ndụ.
The ezi ndụ na-amalite mgbe anyị na-atụgharị site na mmehie anyị, anyị kpebiri ịhapụ ihe niile anyị na ha nupụrụ isi n'azụ, na anyị na-etinye okwukwe anyị n'ime Jizọs. Nke ahụ bụ mgbe ezi ndụ na-amalite. Ma okwukwe anyị anaghị akwụsị ebe ahụ. Anyị na-alụ ọgụ adị kwa ụbọchị na-anọgide na-atụkwasị Chineke ma kwere na Ya n'elu ụgha nke onye iro.
Okwukwe bụ ihe kwa ụbọchị na-alụ ọgụ
Amata na ob bụghị nanị mmehie n'ebe a n'abalị. Na mgbe anyị na-eche mgbe anyị mere mmehie, ọ bụ naanị n'ihi na anyị nwere nke a nke adịghị ike. Ma nke ahụ abụghị dum akụkọ. Ọ bụla mmehie nsogbu bụ a okwukwe nsogbu. Anyị mere mmehie n'ihi na nka. Anyị kwenyere na onye iro ụgha ma na-erubere ha kama eziokwu Chineke.
Ya mere, mgbe anyị na-enupụ isi, ọ bụ n'ihi na anyị kwere ụgha ikike ka e nwere imerụ anyị ghara inyere anyị aka. Na ọ bụ n'ihi na anyị na-ekweghị na Chineke mgbe ọ na-ekwu O tinyere ikike na ebe anyị mma. Na mgbe anyị na-enwe mmekọahụ tupu alụmdi na nwunye, ọ bụ n'ihi na anyị kwere ihe bụ ụgha, na nke ahụ bụ ụzọ kasị mma onwe anyị obi ụtọ. Na ọ bụ n'ihi na anyị na-ekweghị na Chineke mgbe Ọ na-ekwu na mmekọahụ bụ di na nwunye, na nke ahụ bụ ihe ndị ọzọ ebe ọ na-ezi ụtọ.
na Ndị Rom 1, Pọl na-ekwu na ọ na-arụ ọrụ iji mee ka e "nrubeisi nke okwukwe" - nrubeisi na-aga site na okwukwe na Jizọs. Ya mere, olee otú anyị ọgụ ka na okwukwe? Olee otú anyị na-eri nri okwukwe anyị?
Anyị kwesịrị OKWU CHINEKE
Ndị Rom 10 -ekwu, "Okwukwe si n'aka ntị, na-anụ site na Okwu nke Kraịst. "
Ndụ ime mmụọ anyị amalite na okwukwe na Okwu na ya na-aga n'ihu na otu. Ma ụbọchị ọ bụla anyị na-na-bombarded na ụgha ndị ụwa, anụ, na ekwensu nri? Olee otú i agha ụgha? na eziokwu! Ya mere, ebe a bụ ihe atụ nke otú e si eji Okwu Chineke. Ụbọchị ọ bụla anyị na-anụ ozi banyere mmekọahụ, bombarded na ghara ịdị ọcha oyiyi, na obi anyị n'ezugh'okè chọrọ nke a kwere ụgha ndị ahụ. Ya mere, anyị na-alụ ọgụ ụgha ndị ahụ na eziokwu. Gịnị ka Okwu Chineke na-ekwu banyere mmekọahụ rụrụ arụ na?
N'ihi na nke a bụ uche Chineke, gị nsọ: ka unu ghara ịkwa iko; na onye ọ bụla n'ime unu mara otú e si achịkwa ahụ nke ya n'ịdị nsọ na nsọpụrụ, bụghị na ahuhu nke agụụ ihe ọjọọ dị ka ndị mba ọzọ na-amaghị Chineke. (1 Ndị Tesalonaịka 4:3-5 ESV)
Anyị dị ka a ụgbọ ala. Anyị agba ọsọ nke gas adị kwa ụbọchị. Ịnọgide na-eje ije n'okwukwe, anyị mkpa mmanụ ụgbọala. Na mmanụ ụgbọala bụ Okwu Chineke. Ọ bụrụ na anyị na-enweghị na mmanụ ụgbọala anyị agaghị anọgide na-atụkwasị ya. -Agaghị ekwu ma ọ bụrụ na anyị na-adịghị na-agụ Okwu otu ụbọchị anyị ga-ekweghị na Chineke mgbe anyị na-eteta. Ma mgbe m na-adịghị na Okwu, M na-eche na ọ. M na-eche na ekweghi-ekwe-eri okwukwe n'akụkụ dịgasị iche iche nke ndụ m.
Na anyị adịghị alụ ọgụ maka okwukwe na Okwu naanị. Chineke dị anyị mkpa ndị mmadụ.
Ma ume ibe ụbọchị ọ bụla, dị ka ogologo oge ọ na-akpọ "taa,"Na ọ dịghị nke ị nwere ike obi tara mmiri site n'aghugh nke mmehie. (Ndị Hibru 3:13 ESV)
N'ihi na ndị anyị n'ime ụlọ a n'abalị a bụ ndị kwere ekwe, ihe bụ mmekọrịta nke gị dị ka Ndị Kraịst ndị ọzọ? Ị na dị nnọọ na-aga chọọchị ma ọ bụ ị na-etinye oge dị mma na ndị ọzọ? Anyị kwesịrị n'ezie na-eje ije na ndị Kraịst ndị ọzọ. Dị anyị mkpa ịdị na nso mmekọrịta. Anyị kwesịrị onye ọ bụla ọzọ n'ihi na ngosipụta. Mgbe m na-akpa nwunye m, a nnukwu ihe e ndị na ndụ m na-ejide m aza ajụjụ anyị ókè.
Ọ bụrụ na ị na-etinye gị okwukwe na Kraịst, ị na-adịghị na-enye na. Ị ndị a tọhapụrụ. Na mgbe ị na-eje ije na nnwere onwe, ị ga-enwe ike ibi ndụ dị ka e zubere ka ọ na-enwe. Ị ga-enwe ike ibi ndụ n'ụzọ na e kere anyị ibi.
Ya mere, anyị ọgụ ka okwukwe, Ma, gịnị ka erube isi, kwesịrị ntụkwasị obi ndụ anya dị? Gịnị ka ọ dị ka mgbe anyị na-esite n'okwukwe na ezi Chineke?
II. The Good Life e wuru Around Jesus
E nwere ihe m na-agụ n'oge on ka a Christian na bibie m ochie foto nke ezi ndụ. A bụ otu ihe atụ.
-Eme ịnwụ ọnwụ uru
Anyị niile nụrụ ndị na-ekwu banyere ọnwụ site n'oge ruo n'oge. Anyị na na na nụrụ ndị na-ekwu, "Ọ dịghị ihe dị ndụ bụ n'aka ma ọnwụ na ụtụ isi." Otu ewu ewu rapper kwuru, "Ana m agbalị ka iti ndụ 'na-akpata enweghị m ike na-aghọ aghụghọ ọnwụ." ​​Ndị mmadụ na-aghọta na ọnwụ apụghị izere. Ma, dị ka a na-eto eto Christian, M na-agụ a amaokwu banyere ọnwụ na Bible nke di ka ihe-efu m mgbe nụrụ tupu. Pọl onyeozi kwuru banyere ọnwụ na a iju ụzọ. Paul kwuru abụghị nanị ọnwụ bụ ụfọdụ, O we nara ya a nzọ ụkwụ n'ihu. ọ si, "Na-anwụ anwụ bụ uru." Gịnị!?
Ọnwụ bụ mgbe ụbụrụ gị, obi gị, na gị n'akpa ume ịkwụsị ọrụ ha. Ọnwụ pụtara ọgwụgwụ nke ndụ ihe jikọrọ ya na ndị òtù ezinụlọ. Ọnwụ bụ ndụ unu ọrụ dị n'ofe. N'adịghị ka anyị ọnwụnwa ndị ọzọ, ọnwụ bụ, n'ihi na onye na-anwụ anwụ, n'ụzọ nkịtị "ndị ọgwụgwụ ụwa" - ọgwụgwụ nke otu na agbanyeghị. Olee otú ọnwụ ndidi uru? M ike ime ka ego mgbe m nwụrụ? M ike dịkwuo m ọnọdụ mgbe m nwụrụ. O kweghị ha dabara na m ochie echiche nke ọma ndụ.
Ọma ka m ịghọta ihe Pọl bu n'uche anọ okwu - "na-anwụ anwụ bụ uru" - m nwere ike ịghọta ihe anọ ahu nke ruru nri n'ihu ha. na Filipaị 1 Paul na-akọwa ihe mere o yiri ka OK na-ma-anọ ndụ ma ọ bụ na-anwụ anwụ n'aka ndị na-akpagbu. Ọ na-ede na amaokwu 21, "Iji dị ndụ bụ Christ. "Ka okwu ndị, onyeozi gwara m otú ndụ n'ezie ihe nile banyere - bụghị ego, ọ bụghị m n'ọrụ, ọbụna ezinụlọ - ma Jesus. Olee otú m nanị ọdịmma onwe, ọnọdụ-ekwe worldview adị ndụ ọzọ ka na eziokwu?
Achọpụtala m na ihe ịga nke ọma egwuregwu na ihe ọ bụla egwuregwu, -agbachitere, niile o nwere ihe jikọrọ. Ha na-enwe ibu na-emeri. Na ha na ibu, a ọchịchọ miri emi nke iji merie, trumps ha nile ọzọ ọchịchọ na egwuregwu. Ya mere, ha na-adịghị tumadi na-echebara endorsements, ma ọ bụ na-eme ihe pụtara ìhè na-esi anwụde, ma ọ bụ mpe mpe akwa ha stats. N'ezie ha na-eche banyere nke ahụ stof, ma na njedebe nke ụbọchị, nke ahụ abụghị ihe ha na-egwu maka. Ha na-akpọ iji merie. Ya mere, ọ bụrụ na ha nwere ohere nke ga-abara ha uru, ma ọ bụghị otu egwuregwu, ha na-ebufe. Ha dị nnọọ chọrọ imeri.
Ọma nke ahụ bụ na egwuregwu egwuregwu. Ka anyị chee echiche banyere ndụ. na ndụ, na ihe Pọl na-echu. Na ọchịchọ na trumps niile ọzọ ọchịchọ. Na ahuhu na supersedes ya nile ọzọ agụụ mmekọahụ bụ Kraịst. Ọ bụghị na ọ kpọrọ asị asị ndụ, ma ọ bụ ezinụlọ, ma ọ bụ ntụsara; Ọ bụ naanị na ịsọpụrụ Jesus edi akakan. Ọ bụ isi ihe. Ma nke ahụ bụ doo anya ihe ọ na-ede na Itie.
Pọl na-ekwu na Filipaị 1, o wee bie ndụ ma ọ bụ nwụọ; ndien enye Ọ ga-abụ ezi n'ihi na Jizọs ga-okpono. na amaokwu 21 gwara anyị ihe mere. Ọ na-aghọta ihe. Ịdị ndụ bụ Kraịst. Ndụ bụ Kraịst. E kere anyị Jizọs na maka Jesus. Jizọs bụ na-eme ebere Onye-nzọpụta, onye guzo n'ebe anyị na-na-enye anyị ndụ ọhụrụ. Jizọs bụ anyị onye ogbugbo n'ihu Nna. Jesus ga ịbụ ihe mkpali maka ihe niile anyị na mkpebi. Jesus kwesịrị ịbụ akwọ ụgbọala odudu n'azụ anyị ọ bụla enyo. Ọ bụ ihe niile banyere Jesus. Ọ dighi ezi ihe ndụ wezụga Jizọs, n'ihi na enweghị Jesus ndụ enweghị pụtara. Ịdị ndụ bụ Kraịst.
Ndụ gị abụghị ihe ị, ma banyere Jizọs. Ya mere, nke a na-agbanwe ụzọ anyị na-ahụ ihe niile.
Gịnị banyere anyị na nrọ na ihe mgbaru ọsọ? Ị kwesịrị ị nwere nnukwu nrọ na nnukwu ihe mgbaru ọsọ, ma ha ga-hiwere Jesus. E kere anyị ibi ndụ otú na-egosi na Ya ga-onye Ọ bụ. Pọl na-ekwu na Filipaị 1 na ọ bụrụ na ọ na-adịgide ndụ n'anụ ọ pụtara amị mkpụrụ ọrụ Ya.
Arụsi n'ihi na Jizọs
Ọ na-echetara m a na-akpa ọchị akụkọ. Otu ugboro, M nọ na Dallas na m gara otu n'ime ọkacha mmasị m ghere eghe ọkụkọ tụrụ, William si Chicken. The ọrụ bụ mgbe niile jọgburu, ma ọkụkọ bụ otú ahụ ihe ọma. Mbanye site ọrụ ọjọọ, ma mgbe ahụ, m ga-esi n'ihu. Ọ bụ anya na azụ na-ekwu okwu na m ga-esi ya anya. Na ọ na-ekwu, "Oh, m ọjọọ Echefuru m banyere gị Bro. "Gịnị mere i ị chefuru? N'ebe ọrụ! Nke ahụ bụ ihe ị na-eme na-arụ ọrụ. Olee otú ị na-echefu na-arụ ọrụ? O ọkọdọ dọpụ uche.
N'otu aka ahụ ezie na, anyị na-otú adọpụkarị uche. Anyị na-echefu ihe anyị na a na-etinye ebe a na-eme. Na na anyị omiiko banyere arụ Ya, otú nile nke onwunwu ihe ụwa nwere inye sere anyị pụọ.
Arụ n'ihi Christ apụtaghị na anyị niile mkpa ọ dị ịbụ ndị nkwusa. Anyị kwesịrị ọkàiwu, rappers, ndị odeakwụkwọ, waiters, na ụlọ ahịa oru na n'anya Jesus. N'ihi ya, ọ pụtaghị na anyị kwesịrị niile na-aga ịgbanwe ihe anyị na-ma ọ bụ nwewa eme, ezie na ma eleghị anya ọ ga-. Ihe ọ pụtara n'ezie bụ, anyị kwesịrị ịbụ maara na ihe Chineke na-akpọ anyị ka anyị mee dị ka ndị kwere ekwe, na chepụta otú na-arụ ọrụ na na anyị pụrụ iche ọnọdụ. Ya Aga anya dị iche iche na iche iche ndụ, ma anyị nwere ike ime ya ka ebube-Ya.
A maara m ụfọdụ ndị nkwusa na-eji amaokwu na-ezighị ezi, ka anyị kwenye na ọ dịghị ọnwụnwa. N'echiche ha ezi ndụ dị ka anyị na Kraịst bụ a ndụ na ihe ọ bụla ọnwụnwa ugbu a. M ike n'ihe nile - nso ke emi ẹwọrọ? Na ọ bụ ezie na m ara na basketball, site na Kraist m pụrụ ịbụ ihe NBA nile-kpakpando? No, Pọl na-ekwu ma m ọgaranya ma ọ bụ ogbenye, Na na na ọdịnaya. N'ihi na m nwere Christ.
Chineke adịghị ka ụfọdụ n'ime anyị n'ụwa nne na nna bụ ndị na-agaghị anabata anyị ma ọ bụrụ na anyị na elu nke n'ọkwá dị elu. Chineke adịghị achọ ọnọdụ, ka ọ jụrụ ikwesị ntụkwasị obi.
M na-aka mgbe m gụrụ ihe Pọl kwuru, karịsịa atụle Pọl ọnọdụ. Paul bụ nke dị n'etiti ihe jogburu onwe ọnọdụ. Ma oghere ọ na-ahụ ya site na mgbanwe ihe niile. Ịdị ndụ bụ Kraịst na-oghere ọ na-ahụ Ya ikpe site.
Mgbe ụfọdụ, anyị atụfu a kwesịrị ekwesị ka bụ nwatakịrị nọ n'etiti ọnwụnwa, n'ihi na anyị na-eche n'ọnọdụ nile bụ banyere anyị. Anyị na-eche na anyị na-ekwu na ndị enyi anyị, banyere otú ikenenke ọ bụ, na otú ike ọ bụ. Anyị itu etolitewo iwe ọkụ n'ihi na anyị na-eche ọnọdụ anyị na-emecha banyere anyị na-ala. Ma ha na-agaghị. Ha na-na banyere Jizọs. Anyị ga mgba site n'ọnwụnwa dị iche iche, ma ọ bụrụ na kama ilekwasị anya n'otú iru ala na anyị bụ na anyị ga-elekwasị anya otú na-asọpụrụ Jesus n'etiti ya. Nke ahụ bụ ezi ndụ.
-Eme ewu ndụ gị gburugburu Jesus pụtara na ọ nwere na-agwụ ike ma ọ bụ enweghị obi ụtọ? Ọ bụghị n'ezie. M maara ụgha pụrụ iyi ihe na ihe mara mma mgbe ụfọdụ, ma eziokwu bụ na ọ bụ a nwụrụ anwụ ọgwụgwụ. Ọ na-agbapụ oke ala. -Esonụ Jesus apụtaghị na anyị adịghị enwe ihe, ọ dị nnọọ pụtara na anyị nụ ụtọ ha nri. Kama na-eduga na obi mgbawa ha na eduru ọzọ ọṅụ.
Ihe niile dị mma mgbe ụtọ na onodu e zubere ka ọ. Ọbụbụenyi-atọ ụtọ karị mgbe wuru gburugburu Ya. Abụọ gbaghara ndị mmadụ ịgbaghara ibe, nke na-eme enyi dịkwa ụtọ. Ị nwere ike ẹkeyakde elu na-enwe ego, mgbe ị na-adịghị efe ya.
The ọṅụ anaghị adịru. Ndị na-ewu ndụ ha enweghị isi ihe mere onwe ha maka mbibi. Ma ndị na-ewu ndụ ha gburugburu Christ nwere ike agaghị ebibi ebibi. Ọ bụ onyinye si n'aka Chineke ma ọ na-apụghị-anapụ.
Ya mere, anyị nwere ụfọdụ nkọwa banyere nke a mma ndụ, ma ebe ka e si enweta? Olee otú anyị ga-esi ya?
III. The Good Ndụ bụ onyinye Chineke Nwere Ịhụnanya
Chineke chọrọ ka ị na-ebi ndụ ndị ezi ndụ. O kere gị aka ibi ndụ na-ezi nd. Anyị mmehie bụ ihe na-anyị na ya. The ụgha na anyị na a gwara bụ na Chineke chọrọ ka anyị si ezi ndụ. Ka Ọ chọrọ ka anyị bụrụ ndị dara mbà n'obi na atụ uche si na ihe niile ọṅụ. Ma nke ahụ bụ ihe nzuzu.
Ọ hụrụ anyị n'anya nke ukwuu nke na ọ bụ ezie na anyị emehiewo, ndị e kewapụrụ na Ya, O zitere Jizọs ka anyị nwere ya. Anyị nọ na-ebipụ Chineke, bụ isi iyi nke ezi.
E nwere ọtụtụ iche n'etiti foto nke ezi ndụ m mụtara na Paul, na picture m mụtara na omenala. Ma otu n'ime ndị kasị iche bụ otú anyị ga-esi n'ebe. Ụwa akanyam anyị a "ezi ndụ" na anyị nwere ike irite. Na ọbụna ụfọdụ n'ime ndị na-arụ ọrụ ahụ kasị sie ike imeta ya, ọ na-anọgide nke iru. Ma na Akwụkwọ Nsọ na foto nke "ezi ndụ" bụ dị iche iche. Ọ bụ a free onyinye nke ahụ bụ dị ka ihe niile.
N'ihi na site na amara ka e jiworo zọpụta okwukwe. Ma nke a abụghị gị onwe gị ime; ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n'ihi ọrụ, nke mere na ọ dịghị onye nwere ike ịnya isi. (Ndị Efesọs 2:8-9 ESV)
na John 11, Jesus na-ekwu,, "Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye nēkwere na Mu, ezie na ọ anwụ, ma ọ ga ndụ, na onye ọ bụla bụ onye bi na-ekwere na Mụ ga dịghị anwụ anwụ. "Nke ahụ bụ ozi ọma.
Atụkwasị Jesus pụtara na anyị na-eweghachi Chineke, nke bụ ịtụnanya ozi ọma n'ihi na anyị e mere na-enwe Chineke. Anyị na-enweta na-enwe Ya now na Okwu Ya. Anyị Ile sports, na oké performers n'ihi na anyị na-enwe ịdị ukwuu. Ọ nweghị ihe dị ukwuu karịa Chineke onye kere ha. Ịdị ukwuu ya na-eme ka ha anya ndiọi.
Nke a bụ ya mere Pọl ji kwuo "na-anwụ anwụ bụ uru,"N'ihi na ma ọ nwuru ma ọ bụ dịrị ndụ, Jesus ga-okpono. Life pụtara na ọ na-akawanye na-eje ozi Jesus na ọnwụ pụtara na ọ na-akawanye na-na Jesus - na e nwere ihe o nweghị ebe ọ ga kama ịbụ (Ndị Filipaị 1:23). Anyị nwere ike ịmụta Paul ebe a. Nke bụ eziokwu bụ, ọ dị mma na-unyi ogbenye na ọnụnọ nke Jesus karịa ka ruru unyi ọgaranya n'iru ikom.
Ị ga-eso Jizọs? Anyị ga-enwe ike ikwu na-anwụ anwụ bụ uru, ruo mgbe anyị n'anya n'ezie Jesus. Ị na Ya n'anya karịa ndụ a? Psalm 73. Nanị ụzọ ga-esi e site ilekwasị Ya na Okwu ya, na-esikwa n'ihe ndị na ígwé ojii gị ọhụụ. Ụfọdụ n'ime anyị-eche ihe mere anyị na-adịghị hụrụ Jizọs n'anya ọzọ, ma anyị jidesienụ ihe na-anyị si anọ anyị nso na Ya. Tụgharịa na-agba ọsọ Ya. Nke a kwa bụ a ọgụ nke okwukwe.
Anyị nwere ike ibi ndụ n'ụzọ kwekọrọ na e kere anyị ibi.
Ọ bụrụ na m na-ahụbeghị a ohuru na foto nke ezi ndụ na m ga-egbughị ndụ m na-agbaso stof nke ahụ adịghị mkpa. Ma site n'amara Chineke gosiri m ndị anọ okwu: ịdị ndụ bụ Kraịst. O nyere m amara na-ebi ndụ site okwukwe na ezi Chineke.
Ezi ihe? Onye akowa mma? Chineke na-eme. Ezi na-asọpụrụ Jizọs na ịbụ na Ya. Ọ bụrụhaala na m kweere ụgha na omenala gwara m, M na-adịghị ebi ndụ na ihe ọma ndụ. Ma mgbe m malitere ibi ndụ site okwukwe na ezi Chineke, m ezi ndụ malitere. M malitere ịhụ ihe ọma na ndụ dị ka a ndụ ọhụrụ site Jesus, chụpụrụ site Jesus, na biri na ebube Jesus. The nwoke bi n'ihi na ya onwe ya rite ihe ọ bụla na-adịgide adịgide ná ndụ a ka, ọ ga-naanị-enwe ila n'iyi na-esonụ. Ma nwoke ahụ nke ndụ n'ihi Kraịst na-akawanye a uto nke ihe ọma ná ndụ ugbu a, na ọnwụ ya nātukwasi Ya ihe Ọ chọrọ kacha.
sheyi • August 20, 2013 na 11:39 pm • zaghachi
A nnukwu ngọzi a kemgbe m. Jehova dị nnọọ zara ekpere m. Amen
Bman • November 15, 2013 na 2:00 Abụ • zaghachi
Nke a n'ezie na-anya opener .thnx